Nepalistudio » चर्चित नेताहरु : कसको मत कति ? (मतपरिणाम सहित) चर्चित नेताहरु : कसको मत कति ? (मतपरिणाम सहित) – Nepalistudio
चर्चित नेताहरु : कसको मत कति ? (मतपरिणाम सहित)
पहिलो र दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभाको लागि मैदानमा उत्रेका ‘हेभिवेट’ नेताहरुको भाग्यको फैसला हुने क्रममा छ ।अहिले देशभरी मत गणना जारी रहेको छ भने केहि स्थानको नतिजा आइपनि सकेको छ ।
कांग्रेस सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवा उम्मेदवार रहेको डडेलधुरामा मतगणना जारी रहेको छ । उनले अहिले सम्म १० हजार ९ सय ६० मत पाएका छन् । उनीसंग प्रतिस्पर्धामा उत्रेका खगराज भट्टले ६हजार ५ सय ६८ मत पाएका छन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा क्षेत्र नं ५बाट उमेदवार बनेका छन् । उनले अहिले सम्म १४ हजार ६ सय ८५ मत ल्याएर अगाडि छन् । उनीसंग प्रतिस्पर्धामा उत्रेका नेपाली काँग्रेसका खगेन्द्र अधिकारीले ६ हजार ३ सय ९१ मत ल्याएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’ चितवन क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचनमा होमिएका छन् । उनले अहिलेसम्म ५७५६ ल्याएका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी राप्रपा प्रजातान्त्रिकका विक्रम पाण्डेले ३३५९ मत ल्याएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तनहुँ क्षेत्र नं १बाट उमेदवार बनेका छन् । उनले अहिले सम्म १२हजार ६ सय ६४ मत पाएका छन् । उनी संग दोस्रोपटक भिडिरहेका कृष्णकुमार श्रेष्ठ १५ हजार ८ सय २४ मत ल्याएका छन् । पौडेल अहिले श्रेष्ठ भन्दा ३ हजार मतले पछाडि छन् ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम बर्दिया १ नं क्षेत्रबाट उमेदवार बनेका छन् । उनले अहिले सम्म १४हजार ६ सय ८४ मत पाएका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी संजयकुमार गौतमले १३ हजार ८२ मत पाएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका नेता शशांक कोइला नवलपरासी पूर्व १ बाट उम्मेदवार छन् । उनले अहिले सम्म १० हजार ८ सय ७ मत पाएका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका भविश्वर पराजुलीले ७ हजार ६ सय ५९ मत पाएका छन् ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भिम रावल अछाम क्षेत्र नं १बाट उमेदवार बनेका छन् । उनले अहिले ३ हजार ९ सय ७० मत ल्याएका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी नेपाली काँग्रेसका भरतकुमार स्वाँर ३ हजार ६८ मत ल्याएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका सुनसरी ३ का उम्मेदवार विजयकुमार गज्छदारले ५ हजार १ सय ५७ मत पाएका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेकी भगवती चौधरीले ६ हजार ८ सय ३० मत ल्यार लिड गरी रहेकी छन् ।
इलाम क्षेत्र नं २ बाट सुवासचन्द्र नेम्वाङले ६ हजार ५ सय ३ मत ल्याएका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी नेपाली काँग्रेसका केशव थापाले ४ हजार ६ सय ३६ मत पाएका छन् । माओवादी केन्द्रका चक्रपाणि खनाल ३ हजार ३ सय ४ मत ल्याएका छन् । उनका प्रतिस्र्धी नेपाली काँग्रेसका दिपकुमार उपाध्याय २ हजार ४ सय ७३ मत ल्याएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका नेता रामशरण महत नुवाकोट क्षेत्र नं १बाट निर्वाचनमा होमिएका छन् । उनले अहिलेसम्म११ हजार ५ सय मत पाएका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता हितबहादुर तामाङले १३ हजार ९ सय ८० मत ल्याएर महतलाई पछारीरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका नेता सुरेन्द्र कार्की झापा क्षेत्र नं १बाट चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् । उनले अहिले सम्म १४ हजार ७ सय ७४ मत ल्याएका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी विश्वप्रकाश शर्माले १३ हजार ९ सय ४९ मत पाएका छन् ।
झापा क्षेत्र नं ३ बाट नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलाले ११ हजार ४८ मत ल्याएका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी राप्रपाका राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले १५ हजार ६ सय ९० मत ल्याएका छन् । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा मकवानपुर क्षेत्र नं १बाट १० हजार ३ सय ३८ मत ल्याएका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी कृष्ण प्रसाद दाहल ११ हजार ३ सय ६९ मतले ल्याएर अगाडि छन् ।
कैलाली क्षेत्र नं५बाट प्रधानमन्त्री पत्नी आराजु राणा देउवाले अहिले सम्म ७ हजार ९ सय ७० मत ल्याएकी छन् । उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका नारदमुनी रानाले ८ हजार ९ सय ९० मत ल्याएर देउवालाई पछाडि छोडेका छन् । यसैबीच केहि हेभिवेटको भने नतिजा आएको छ । सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं २ मा राप्रपा प्रजातान्त्रिकका पशुपतिशम्शेर जबरा एमालेका शेरबहादुर तामाङसँग पराजित भए ।
यस्तै विवेकशील साझाका रवीन्द्र मिश्र काठमाडौं १ मा प्रकाशमानसिंह पराजित भए । यता गगन थापा भने काठमाडौं ४ बाट विजयी भएका छन् ।